खुसिको खबर: नेपालमै दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको एसेम्बल गर्न धमाधम आवेदन दिँदै अटो कम्पनीहरु - Public 24Khabar
Home News खुसिको खबर: नेपालमै दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको एसेम्बल गर्न धमाधम आवेदन दिँदै...
खुसिको खबर: नेपालमै दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको एसेम्बल गर्न धमाधम आवेदन दिँदै अटो कम्पनीहरु
नेपालमै दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको एसेम्बल गर्न धमाधम आवेदन दिँदै अटो कम्पनीहरु
मंगलबार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारीपछि जटिल र गम्भीर मोडमा पुगेको नेकपा विवाद बुधबार साँझसम्म आउँदा केही शान्त भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेश फिर्ता लिन र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विशेष अधिवेशन बोलाउन निवेदन दर्ता गर्ने निर्णयबाट पछाडि हटेपछि नाटकीय रुपमा विवाद केही शान्त जस्तो देखिएको छ ।
तर, यति महत्वपूर्ण निर्णयमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले भने स्थायी कमिटी बैठकमा सुनाएनन् । ओली र दाहालबीचको सहमतिलाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताले पनि शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् ।
नेकपा विवाद अचानक शान्त हुनुको कारण बुझ्न दिनभर भएका घटनाक्रमतर्फ जानुपर्ने हुन्छ । दिउँसो एक बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको थियो । एक नेताका अनुसार बैठक अगाडि नै ओलीले संवादका लागि भन्दै दाहाललाई ‘आज फाइनल कुरा गरौं, तपाईं आउनुस्’ भनेर बालुवाटार बोलाएका थिए । त्यसैअनुसार दाहाल साढे १२ बजे बालुवाटार पुगेका थिए ।
ओली र दाहालबीच साढे १२ बजे नै पहिलो चरणको संवाद भएको थियो । ती नेताका अनुसार ओली र दाहालबीच पहिलो संवाद सकारात्मक भएको थिएन । ओली र दाहालको संवादलाई नजिकबाट हेरेका सचिवालयका ती नेताका अनुसार पहिलो संवाद सकारात्मक नभएपछि दाहाल बैठक चलाउन हलमा आएका थिए ।
तर, बैठक औपचारिक रुपमा सुरु भएको थिएन । यस बेलासम्म शीतल निवास पुगेका भीम रावल र पम्फा भुसालले विशेष अधिवेशन सम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न पाएका थिएनन् । उनीहरु १२ बजेर ४८ मिनेटमा नै शीतल निवास पुगेका थिए ।
ओलीसँगको संवादपछि दाहाल हलमा आएको केहीबेरमै महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्ष दाहाललाई ओलीसँग संवाद गर्नुपर्ने भयो भन्दै जान आग्रह गरे । त्यसपछि बैठक सुरु नगरी दाहाल दोस्रो चरणको संवादका लागि ओलीकहाँ पुगेका थिए । ओली र दाहालबीचको दोस्रो संवादमा महासचिव पौडेलबाहेक स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, घनश्याम भुसाल पनि सहभागी थिए ।
दोस्रो संवादमा भने ओली नरम तरिकाले प्रस्तुत भएको सहभागी एक नेताले बताए । स्रोतका अनुसार त्यही छलफलमा ओली र दाहालबीच समझदारी भएको थियो । पहिलो, सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने । दोस्रो, संसद् अधिवेशनको मागको निवेदन फिर्ता लिने । र तेस्रो, सहमतिमा नै छिट्टै संवैधानिक नियुक्ति गर्ने ।
यो सहमतिपछि ओली बैठकमा आउन तयार भएका थिए । चार बजेमात्रै स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको थियो । बैठकको सुरुमै अध्यक्ष दाहालले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार दाहालले भनेका थिए, ‘व्यवस्था नै उल्टिने त हैन भन्ने चिन्ता प्रकट भइरहेका छन् । अहिले हामीले यसलाई बचाउनु पर्छ । बचाउन पार्टीभित्र अन्तर्विरोध हल हुनुपर्छ । छलफल र निर्णय गरेरमात्रै अन्तरविरोध हल गर्न सकिन्छ ।’
बैठकमा दाहालले दुई बुँदे सहमति भएको जानकारी दिँदै भनेका थिए, ‘अहिले केपी कमरेडले मेरो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ । तर, त्यो फिर्ता लिने स्थिति छैन भनेर मैले भनिरहेको छु । बैठकमा छलफलबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । अहिले भएको सहमति दुई वटामात्रै हो । एउटा, अध्यादेश फिर्ता लिने र अर्को संसद् बैठक बोलाउने निवेदन फिर्ता लिने ।’
दाहालपछि ओली बोलेका थिए । बैठकमा केही नरम भएर प्रस्तुत भएका ओलीले दाहालको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखे । स्थायी कमिटीका ती नेताका अनुसार ओलीले भनेका थिए, ‘पार्टी अहिले अफ्ट्यारो ठाउँमा छ । संवेदनशील ठाउँमा छ । हामी सबै मिलेर सहज बनाउन सकिन्छ, सबै नमिले सकिँदैन । नत्र ध्वस्त भइन्छ । तर गालीगजौज, झगडा, आरोप्र प्रत्यारोप गरेर समाधान हुँदैन । त्यसैले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ ।’तर बैठकमा ओलीले सहमतिबारे बोलेनन् । बरु ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउँ न त भनेर प्रस्ताव गरेका थिए ।
ओलीले पहिलो लहरमा बसेका पाँच जनामध्ये गौतममात्रै प्रधानमन्त्री नभएको भन्दै उनलाई कतैबाट चुनाव लडाएर प्रधानमन्त्री बनाउन त भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
बैठकमा अध्यादेश र सहमतिबारे ओली नबोलेपछि वरिष्ठ नेता नेपालले हस्तक्षेप गरेका थिए । स्थायी कमिटीका ती सदस्यका अनुसार नेपालको भनाइ थियो, ‘यो कुरा त भयो । तर आजको सहमति के हो ? अध्यादेश फिर्ता लिने र सांसदको निवेदन फिर्ता लिने भनेको हो कि हैन ? तपाईंहरुबीचमा के सहमति भएको छ, त्यो तपाईंहरु बीचको सरोकारको विषय हो । पार्टीको निम्ति बैठकमा सहमति हुन्छ या त बैठकले निर्णय गर्छ ।’
त्यसपछि स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले भएको सहमतिबारे गाह्रो नमानी बैठकमा प्रष्ट पार्दिनँ आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि स्थायी कमिटी सदस्य नेम्वाङले पनि दुई अध्यक्षबीचमा भएको सहमतिबारे बोलेका थिए ।
नेम्वाङ र भुसालले दुई अध्यक्षबीचमा भएको सहमतिबारे बैठकमा सुनाएपछि बल्ल ओलीले प्रक्रिया पुर्‍याएर अध्यादेश फिर्ता लिन गाह्रो नपर्ने बताएका थिए । तर, उनले आत्मालोचना नगरेको ती सदस्यले बताए । त्यसपछि मात्रै अध्यादेश फिर्ता लिने र सहमतिको आधारमा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने निर्णय सर्वसम्मत्तिले गरेको थियो । अब पुस ५ गते स्थायी र १० गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भएको छ । Ekantipur बाट साभार गरिएको
Previous articleप्लेन चढेर काठमाडौ आइन सपनाको सबैभन्दा ठुलो फ्यान प्रिन्सा,भन्छिन प्रधानमन्त्रीको अन्तरबार्ता लिन्छु
Next articleमिनासँग बस्न सुरु गरेको ८ महिनामा नै छोरी मनोजसँगै घर फर्किएकी थिइन्, मनोजले पहिलो पटक खोले रहस्य
हैट हेर्नै नसकिने यो कस्तो रोग आयो ,कठै (हेर्नुस् भिडियो ) सहयोग काे लागि सेयर गराै
सिद्धार्थ जस्तै देखिने यी युवक, सिद्धार्थको मृ त्यु पछि यसरी एकाएक आए अगाडि,सिद्धार्थको झल्को यसरी मेटाए
हैट हेर्नै नसकिने यो कस्तो रोग आयो ,कठै (हेर्नुस् भिडियो )...
सिद्धार्थ जस्तै देखिने यी युवक, सिद्धार्थको मृ त्यु पछि यसरी एकाएक...